सद्दामले किन मारेका थिए आफ्नै ज्वाइँलाई ? छोरीले गरिन् यस्तो खुलासा | Ratopati
१५ वर्षमै विवाह गर्नका लागि बाबु सद्दाम हुसेनले दबाब दिएका थिए वा यो निर्णय रगदले स्वइच्छाले गरेकी थिइन् ?
जवाफमा रगदले भनिन्,‘मेरो पिताले आफ्ना पाँचमध्ये कुनै पनि बच्चालाई विवाहका लागि दबाब दिइनन् । छोरीको विवाहका लागि कसैले प्रस्ताव ग¥यो भनेपनि उनले हामीसँग नै यसबारे के गर्ने भनेर सोध्ने गरेका थिए । उनले पुरै स्वतन्त्रता दिएका थिए । म त्यतिबेला किशोरी थिएँ, गर्मीको दिउँसोको समय थियो । मेरा बाबु ढोका ढक्कढक्याएर आए । उनले म सामु आएर मेरो हालचाल बुझे । त्यसपछि उनले सोधे – तिम्रो एक प्रेमी छ ? उनले नाम पनि बताए ।’
खास त्यस्तो कारण के थियो, जसले रगदका बाबु सद्दाम र पति हुसेन कमेलबीच दरार सिर्जना ग¥यो ? रगद भन्छिन्, ‘मेरा पतिको शक्ति बलियो हुँदै थियो । मेरा बाबुपछि ईराकमा उनी दोस्रो नम्बरको हैसियतमा पुगिसकेका थिए । परिवारको सदस्य भएकाले उनको भूमिका ठूलो थियो, उनीसँग निर्णय लिने क्षमता पनि थिए । उनीसँग हरेक भूमिकालाई ठीकसँग निभाउने साहस थियो । मसँग विवाह हुनभन्दा पहिलेदेखि नै उनी यस मामिलामा अघि बढिसकेका थिए । हाम्रो विवाहपछि हुसेन कमेल स्पेशल सेक्युरेटीका प्रभावी थिए ।’